माहाकालीको मुल सडक ओटासिल निमार्ण कार्य कछुवाको गतिमा - The First Nepali Digital Newspaper from Australia (Ausnepal news)
माहाकालीको मुल सडक ओटासिल निमार्ण कार्य कछुवाको गतिमा
प्रकाशित मिति: १७ चैत्र २०७४, शनिबार
पप्पु गुरुङ्ग, दोधारा । माहाकालीको मुल सडक समयमै ओटासिल नहँुदा स्थानीयहरुलाई आवत जावतमा निकै समस्या खेप्नु परेको छ् । महाकाली झोलुङ्गे पुल देखि कुतियाकवर सम्मको माहाकाली नगरपालिकाको मुल सडक कछुवाको गतिमा निमार्ण हुन थालेपछि स्थानियहरुलाई सास्ती ब्यहोर्नु परेको छ । माहाकाली नगरपालिकाको वडा नं. ४ महाकाली झोलुङ्गे पुल देखि नेपाल–भारत सिमा वडा कुतियाकवर सम्म करिब ११.७ कि.मि. सडकको भदौ सम्म सक्ने गरि ओटासिल गर्ने काम शुरु गरिएको हो । निमार्ण सुरु गरिएको भने पनि ठेकेदारले समय समयमा निमार्ण कार्य रोक्न थालेपछि स्थानियहरु निमार्ण कार्य प्रति असन्तुष्ट जनाउन थालेका हुन् ।
विश्व बैंकको ७ करोड १३ लाख ८० हजार ९ सय ९५ रुपैयाँ आर्थिक सहयोगमा राष्ट्रिय ग्रामिण यातायात सुदृढीकरण कार्यक्रम अन्र्तगत काम थालिएको हो । सडक निमार्णको ठेक्का आशिष ऋषि पराजुली जे भी कम्पनीले पाएको हो । घाम लागेको बेला सडक भरि धुलै धुलो पानी परेका बेला हिलै हिलोले बाटोमा हिड्ने हामी सर्वसाधारणलाई निकै समस्या खेप्नु परेक त छदै छ सडकमा उडेको धुलो घर भित्र पस्दा स्वास्थ्यमा समेत नराम्रो असर पारेको स्थानीय सरोज श्रेष्टले गुनासो गरे ।
फुटेको गिट्टी पाईएन भन्दैमा स्थानीयलाई त सास्ती दिन भएन नि, श्रेष्टले भने । त्यसो त यो समस्या स्थानीयहरुको मात्र होइन स्कुले बालबालिकाहरु, सवारी चालकले समेत सास्ती खेप्नु परेको छ् । घरबाट ड्रेस लगाएर निस्क्यो स्कुल पुग्न नपाउदै ड्रेस फोहर हुने गरेको एक बिद्यार्थी संदिप सा“उदले बताएका छन् । हावा चलेको बेला झनै धुलै धुलोले हामीलाई निकै समस्यामा पारेको सा“उदले बताए । उता बाटोमा राखिएको ब्यग्रल्ती ग्रेबिलले सवारीका साधनहरु दुर्घटनामा पर्न सक्ने सम्भावना रहेको चालकहरुको भनाई छ ।
बाटोमा ब्यग्रल्ती फालिएका ग्रेबिलले गाडी चलाउन पनि निकै समस्या रहेको छ कहिले सम्म यो समस्या खेप्नु पर्ने हो थाहा छैन, एक चालकले भने । सडक निमार्ण कार्य ढिलाईको साथी निमार्ण क्रममा रहेको सडकबाट आउने धुलोले जनजिवन प्रभावित बनाएको भन्दै स्थानियहरुले बेलाबखत सडक जाम समेत गर्दै आएका छन् ।
माहाकाली नगरपालिकाको महाकाली झोलुङ्गे पुललाई छुने गरि चाँदनी बजार, हेल्थपोष्ट बजार, बाबाथान बजार, सात नंम्वर बजार हुदै कुतियाकवर सम्मको मुल सडक ओटासिल गर्न लागिएको छ् । यस अघि नै ओटासिलको लागी सवै तयारी गरिएको भए पनि महाकाली नदीमा पानीको बहाव तिब्र भएको कारण निमार्ण कम्पनीले मेसिनहरु ल्याउन असमर्थ भएको भन्दै काम ढिलो भएको निमार्ण कम्पनीले जनाएको छ् ।
च्याम्पियन्स लिग सेमिफाइनल ड्र सार्वजनिक,कसको भिडन्त को सँग ?
एजेन्सी । च्याम्पियन्स लिग सेमिफाइनलको ड्र सार्वजनिक भएको छ। शुक्रबार भएको ड्रमा १२ पटकको विजेता रियल […]
१० शहरमा जनयुद्ध दिवस मनाउँदै वाइसिएल, प्रचण्ड र ओलीलाई निम्ताे
काठमाडौं । माओवादी केन्द्रनिकट युवा संगठन वाइसिएलले फागुन १ गते मुलुकका १० शहरमा एकसाथ जनयुद्ध दिवस मनाउने […]
२८ डिएसपीहरूको एसपीमा बढुवा,को-को परे ? (नामसहित)
काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले नेपाल प्रहरीका २८ जना डिएसपीलाई एसपीमा बढुवा गरेको छ । गृह मन्त्रालयको सचिवस्तरको […]
कूटनीतिक सम्बन्धको ५७ वर्षपछि नेपाल र अष्ट्रेलियाबीच परामर्श संयन्त्र बन्दै
असार २८, काठमाडौँ । नेपाल र अष्ट्रेलियाबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको ५७ वर्षपछि आपसी हित र चासोका विषयमा […]
भारत र मधेसी मोर्चाको भन्दा केपी ओली खतरनाकः नेता निधी
काठमाडौं, नेपाली कांग्रेसका नेता विमलेन्द्र निधीले भारत र मधेसी मोर्चा भन्दा प्रधानमन्त्री केपी ओली खतरनाक […]